ဂျပန်အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံသည် Riedel's Bolero နှင့် Artist Intercom Systems တို့၏ဆက်သွယ်မှုများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Riedel ရဲ့ Bolero နှင့်အတူဂျပန်အဆင့်မြှင့်မှုများ၎င်း၏ comm နှင့်အဆိုတော်ခွားစနစ်များအမျိုးသားကဇာတ်ရုံ
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဇန်နဝါရီ 31, 2019 - Riedel ဆက်သွယ်ရေး ကျောက်သလင်း-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆက်သွယ်ရေးကို enable - တစ် 1,610-ထိုင်ခုံပြဇာတ်ရုံနှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ် 590-ထိုင်ခုံပြဇာတ်ရုံ - ယနေ့တိုကျိုမြို့ရှိဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံက၎င်း၏နှစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်ခန်းမဖြတ်ပြီး Bolero wireless နှင့်အဆိုတော်ကြိုးအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်တွေကိုသုံးပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ပြဇာတ်ရုံရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနကိုဖြတ်ပြီးန်ထမ်းအစဉ်အလာဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းနှင့်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကျယ်ပြန့်များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့ Riedel system ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
"ကျနော်တို့အတိတ် 10 နှစ်အတွင်းအသုံးပြုသောင်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးရေဒီယိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံမှမတည်မငြိမ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ သာ. ကြီးမြတ် RF အားကောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ရှာဖွေနေစတင်," မစ္စတာ Makoto Ishii သည်ပြဇာတ်ရုံ၏လက်ထောက် Manager ကဆိုပါတယ် ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာနည်းပညာပိုင်းဦးစီးဌာန။ "တပ်ဆင်ခြင်း, အသံအရည်အသွေး, နှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်လွယ်ကူခြင်းအဘို့အထူးထူးအပြားပြားအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ Riedel ရဲ့အဆိုတော်နှင့် Bolero အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ "
"ကျနော်တို့ Bolero စနစ်အား အသုံးပြု. စတင်ကတည်းကကျနော်တို့ဆူညံသံများနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖယ်ထုတ်ပစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး setup ကိုမှစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုဖြစ်စေကြိုးမဲ့စနစ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုအသုံးပြုကြပါပြီ" ဟုမစ္စတာ Tatsuya Fujisawa, ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာအသံအင်ဂျင်နီယာချုပ်ကဆက်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ Bolero ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းနားကြပ်ကို အသုံးပြု. ရန်ဦးစားပေးမည်အခြားရွေးချယ်စရာမယ့်အခါ, တစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်းရေဒီယိုသောကြောင့် beltpack စပီကာကို အသုံးပြု. ကဲ့သို့ငါတို့ပေးသည်သစ်ကိုရှေးခယျြစရာတွေနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရပါဘူး။ "
ဘက်ပေါင်းစုံ Bolero ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအဆိုတော်စနစ်များကိုမိမိတို့သခင်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်း (MCRs) နဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ထမ်းများချိတ်ဆက်, နှစ်ဦးစလုံးခန်းမထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများကိုအာမခံပါသည်။ ယင်း၏ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးများအတွက် Bolero ရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံပြဇာတ်ရုံလိုအပ်သောအင်တာနာ၏နံပါတ်အဖြစ်သူတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ 13 တစ်ဦးစုစုပေါင်းအဘို့, တစ်ဦးအပိုဆောင်းသုံး beltpack ယူနစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ခွင့်ပြုကုန်ကျစရိတ်ငွေစု။
ငါး Bolero beltpacks တစ်ဦးချင်းစီခန်းမထဲမှာန်ထမ်းများထံအပ်နှံကြသဖြင့်, အခြားသုံး beltpacks အဆိုပါ MCR အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများကအသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို beltpack ခြောက်လလိုင်းများဝါကြွားတတ်, သူတို့အတိတ်တွင်ရှိခဲ့အဖြစ်လည်းကောင်းခန်းမထဲမှာအလုပ်လုပ်န်ထမ်းများမှာလည်း, အ MCR "ဟုခေါ်သော" တိုက်ရိုက်မယ့်အစားတစ်ဦးဖုန်းပေါ်မှာမှီခိုအားထား Point-to-point လိုင်းများ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ "ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာအသင်းက၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာကိုထောကျပံ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြု. ရန်ကျူးလွန်သည် ဖြစ်. , Bolero တို့သည်ကြီးစွာသောမထိုက်မတန်ဖြစ်သက်သေပြနေပါတယ်" ဟုမစ္စ Takako Konishi မှာအရောင်း Manager ကဆိုပါတယ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး ဂျပန်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာရိုးရာဂျပန်စွမ်းဆောင်ရည်အနုပညာရဲ့ပြဇာတ်ရုံရဲ့ကျော်ကြားတဲ့တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းဂုဏ်ယူပါ။ "
ဂျပန်ရဲ့ဂန္ထဝင်စွမ်းဆောင်ရည်အနုပညာရဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်, ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံရိုးရာအကအခုန်များနှင့်သိသိသာသာဖျော်ဖြေပွဲကနေဗုဒ္ဓဘာသာဖူးပါတယ်သို့မဟုတ်ရုပ်သေးပြဇာတ်ရုံအထိနက်ရှိုင်းစွာဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၌အမြစ်တွယ်ဖျော်ဖြေပွဲ၏ကျယ်ပြန့ stages ။ တလေးတစားမိမိတို့၏ရိုးရာဇာတ်ကောင်ထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာခေတ်ပြိုင်ပရိသတ်တွေသူတို့ကိုပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်စေရန်အလို့ငှာဤဖျော်ဖြေပွဲညင်ညင်သာသာခေတ်မီနေကြသည်။ Riedel ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာဖြေရှင်းချက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ, ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံကိုထိရောက်စွာထုတ်ခဲ့သိရပါတယ်နှင့်အနာဂတ်-proofed ။
Riedel ဆက်သွယ်ရေး ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်နှင့်ထုတ်လွှင့်, လိုလားသူအသံ, အဖြစ်အပျက်, အားကစား, ပြဇာတ်ရုံ, လုံခြုံရေး application များအတွက်ရှေ့ဆောင် Real-time ဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များဖြန့်ဝေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းဖြစ်ရပ်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ, ဖိုင်ဘာ Backbones ရဲ့နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရွယ်အစားဖြစ်ရပ်များအတွက်အလွယ်တကူစကေးကြောင်းကြိုးမဲ့ signal ကိုထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုရေဒီယိုနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များများအတွက်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Riedel Wuppertal, ဂျာမနီအခြေစိုက်နှင့်ဥရောပ, သြစတြေးလျ, အာရှနှင့်အမေရိကတိုက်တစ်လျှောက်လုံး 500 နေရာများတွင် 20 ကျော်ကလူလုပ်ကိုင်နေသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/190131Riedel.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-NationalTheaterJapan.zip
ဓါတ်ပုံများ၏ဖော်ပြချက်: တိုကျိုမြို့ရှိဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံက၎င်း၏နှစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်ခန်းမဖြတ်ပြီး Bolero wireless နှင့်အဆိုတော်ကြိုးအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များကိုအသုံးပြုနေသည်။
အလည်အပတ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး Booth 2019-K6 အတွက် ISE 140 မှာ
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=National%20Theater%20of%20Japan%20Upgrades%20Its%20Comms%20With%[အီးမေးလျ protected]%20Bolero%20and%20Artist%20Intercom%20Systems%20-%20http://bit.ly/2G9fYEO
လိုက် Riedel ဆက်သွယ်ရေး
Facebook က: www.facebook.com/RiedelCommunicationsInternational
Google+ မှာ: plus.google.com/111467633812794037948/posts
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/549773
YouTube ကို: www.youtube.com/user/riedelcommunications
Instagram ကို: instagram.com/riedelcommunications
အနုပညာရှင် Bolero ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ comm ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ခွားစနစ်များ ဂျပန်အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ Riedel SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows အဆင့်မြှင့် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-31
ယခင်: ChyronHego ရဲ့ TRACAB နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု Prime ဟန်ပြပထမဦးစွာ-အမြဲ Player ကို-ခြေရာခံခြင်း Powered အားကစားကွင်းကြော်ငြာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
နောက်တစ်ခု: Litepanels နယူး Dual-ဘက်ထရီကွင်းစ, ကြမ်းပြင်ရပ် Kit များနှင့်ဖျ Carry ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Gemini2× 1 Softlight ၏အိတ်ဆောင်ပါဝါစှမျးတိုးချဲ့